Talyaaniga oo ka sare maray Shiinaha tirada dhimashada Cudurka Coronovirus - Jowhar Somali news Leader
Home News Talyaaniga oo ka sare maray Shiinaha tirada dhimashada Cudurka Coronovirus
Talyaaniga oo ka sare maray Shiinaha tirada dhimashada Cudurka Coronovirus
Dalka Talyaaniga ayaa dadka ugu geeriyooday cudurka Coronovirus waxa ay ka sare mareen dalka Shiinaha oo ah dalkii u cudurkan ka soo bilowday.
24kii saacadood ee ugu dambeysay ayaa dalka Talyaaniga waxaa cudurka Coronovirus ugu geeriyooday dad gaaraya 427 ruux taasoo ka dhigtey tirada guud ee cudurkan ugu geeriyootay dalka Talyaaniga 3,405,taasoo ka badan tirada ugu geeriyootay dalka Shiinaha. Guud ahaan tirada uu cudurkani hayo ee dalka Talyaaniga ayaa gaartay 41,035 ruux.
Wadanka Shiinaha oo uu cudurkan markii ugu horeysay lagu arkay ayaa tirada ugu geeriyootay ay gaareysaa 3,245 ruux.
Inku dhow 220,000 oo ruux ayaa illaa iyo hadda laga helay cudurkan iyadoo dad ku dhow 84.000 ay ka soo kabatay cudurkan, balse tirada guud ee u dhimatay ay gaareyso 8,800 oo ruux.
Wararkii ugu dambeeyay ee cudurka Coronovirus
Dalka Qadar ayaa ku dhowaaqay in siddeed ruux laga helay cudurkan iyadoo guud ahaan tirada laga helay cudurka ay gaarayso 460 ruux.
Dalka Faransiiska ayaa laga soo sheegayaa in 108 ruux ay u dhinteen cudurkan iyadoo guud ahaan ay gaareyso 372 tirada dadka ugu dhintey gudaha dalka Faransiiska. Guud ahaan dadka uu cudurkani hayo gudaha dalka Faransiiska ayaa gaareyso 10,995 ruux.
Tirada dadka cudurkan ugu dhintey wadanka UK ayaa gaartay 144 ruux,iyadoo dadka uu cudurkan soo ritey gudaha dalka UK ay gaartey 3,269 ruux.
Dalka Turkiga ayaa tirada dadka cudurkan uu soo ritey lagana helay ay gaareen 191 ruux halka saddex ruuxna ay u geeriyoodeen, hase yeeshee dad tiradooda lagu sheegay inay gaareyso 9,800 oo ruux ayaa la karantiiley.
Dadkan la karantiilay ayaa waxaa ay u badan yihiin dad ka soo laabtay boqortooyada Sacudi Carabiya kadib markii ay soo cimreysteen.
Wadanka Maraykanka ayaa dadka uu cudurkan soo ritey lagana helay ay gaareen 10,491 iyadoo dadka u dhinteyna ay gaarayaan 150 ruux.
Dhammaan gobolada dalka Maraykanka ee kontonka ah iyo weliba degmada Columbia ayuu gaaray cudurkan.